ဖိနပ်များ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖိနပ်များ…..
Posted by Kaung Kin Pyar on Mar 5, 2015 in Creative Writing, Short Story | 34 comments
မိန်းခလေးတွေကိုသာ…သူတို့အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းစာရင်းဆိုပြီး…စစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…ဖိနပ်တွေနဲ့ အိတ်တွေက ထိပ်ဆုံးနေရာက ပါမှာပဲ….
အဲဒီဘိနပ်ကြီး အဆင်ပြေတယ် ဟုတ်
ဘာညာ သာရကာ ဆြာဂျီးလုပ်​ပြီး မ​ပြောချင်​ပါပု
ဒါ​ပေမယ့်​ နီ သိပ်​ကံ​ကောင်းတယ်​ သိလား
ဘာလို့ လဲ ဆို​တော့ ​တောကြို ခြုံကြား လမ်းပမ်းဆက်​သွယ်​​ရေး ခက်​တဲ့ ​နေရာ မှာ လူမဖြစ်​ခဲ့လို့
ဒါတော့ ဟုတ်တယ်…။ အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးနဲ့ ဒီလိုဖိနပ်ကြိုက်ပုံမျိုးဆို သေချာတယ်….
သွားတစ်ချောင်းမှ အကောင်းကျန်မှာ မှုတ်ဖူး…..
ခြေတိုင်းနံပါတ်များသိခဲ့ရင် မန်း ဖိနပ်တရံတောင်ပို့ပေးလိုက်ချင်သေး။
အဲ့ဒီသားရေစိမ်းအနံ့ကို ဘယ်လို သဘောကျမိမှန်းမသိဘူး….။
ငယ်ငယ်က အဒေါ်မန်းလေးသွားတုန်းဝယ်လာတဲ့ မန်းလေးဖိနပ်ကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုယ်နဲ့လဲ မတော်ဘဲ စီးတာ…။ ပြန်ပေးရမှာစိုးလို့ မချွတ်ဘူး….(ဒါက ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်လို့မလွယ်မှန်းလဲ သိနေတယ်လေ….)။
အိပ်နေချိန် ပြန်ယူသွားမှာစိုးလို့ ဘယ်လောက်ပဲ ပြန်မယူပါဘူးပြောလဲ..အဲ့ဒီဖိနပ်ကို အိတ်ထဲထည့်ပြီး အိတ်နဲ့လက်ကို ကြိုးချည်အိပ်ခဲ့ဖူးတာ…..
ခု ပြန်တွေးကြည့်တော့ ရီရတယ်…..။
ကိုယ်တိုင်လည်း ဖိနပ်နဲ့ အိတ်ဆိုရင် မြင်တိုင်းဝယ်ချင်တယ်။
ငယ်တုန်းတော့ လှတယ်ဆိုတာကိုပဲ အဓိကကြည့်ပြီး ရွေးခဲ့ပေမယ့်
အခုတော့လည်း ချော်မလဲအောင် အောက်ခံ grid ကောင်းတာကိုပဲ အဓိကရွေးမိတော့တယ်။
ဖိနပ်ရွေးနေတဲ့အချိန်….အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ရွေးချယ်မှု စံပြောင်းလဲသွားတာကို သတိထားမိရင်း တွေးမိတဲ့ အတွေးလေးပါ….။
အိတ်နဲ့ ဖိနပ်တော့ အရမ်းကြိုက်ပဲ….
ငယ်ငယ်တုံးကတော့ အဖွားကအသားအရမ်းလှတော့ ခြေဖနောင့်လေးတွေနီ ခြေဖ၀ါးလေးတွေ ၀ါနှစ်ပြီးဥနေတော့… ကတ္တီပါခင်း ဖိနပ်လေးတွေ စီးထားရင်အရမ်းလှတာ… အာ့ဂို ကိုယ်လဲလှချင်လို့ အဖွားဖိနပ် ခဏခဏယူယူစီးတယ်… ကိုယ်နဲ့ကျတော့ ခြေထောက်ပေတလူးနဲ့ ဘယ်လှပါ့မလဲ… အဖွားက သူ့ဖိနပ်သူများစီးရင်မလှအောင်လုပ်ထားတယ် ဆိုပီးအော်ငိုတာ မှတ်မိသေးတယ် :hee:
အဲ့ဒီ ကတ္တီပါခင်း ဖိနပ်ပေါ့…။ ခြေထောက်လှတဲ့သူတွေစီးလိုက်ရင်များ…အရမ်းထင်ပေါ်ပြီး သိပ်လှတာ…။ တစ်ခါလား ဒဂုံစင်တာမယ်…အသက် ၃၅လောက်တော့ရှိပြီ…အစ်မကြီးတစ်ယောက်စီးထားတာ…။ သူ့ခြေထောက်လေးက ဖွေးဥနေပြီး လှလွန်းလို့…လိုက်ငေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်…။
ကင်းကောင်ပြာ ဖိနပ်မီစီးနဲ့ ခြေနာဒယ်.. ။ ဂုံးပိုး ပို့ပေးမဲ… လမ်းမှာ လူပြတ်မှ ခြုံတိုးပီး tea မှာ… ချိုဆိမ့် နှီခွက်… မလိုင်နှမ်းခြင်း… လျှာလွတ်
အူးကြောင်ကြီး ခြုံတိုးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတယ်….။ ဒီလိုဆို အူးကြောင်အတွက် ခုံဖိနပ်က အသင့်တော်ဆုံးပဲ…
ဆက်စပ် စဉ်းစားတယ်လား ကိုညိုရေ…..
ကွင်းထိုးဆို စိတ်ထဲ မလုံခြုံဘူးလိုပဲ…။ ဘယ်ချိန် ကျွတ်ကျမယ် မသိသလိုမျိုးနဲ့….။ ကွင်းထိုးဆို ကြိုးသိုင်းပါမှ…
(ဘာရမတုန်းးး နာလည်း ကရင်မလေးတွေ ပဲ လိုက်ကြံတော့မယ်)
ကင်းကြောင်လေး ပို့(စ) ကို မြင်ပြီး ဖိနပ်တောင်းမှာစိုးလို့ ပုန်းနေတာ…
အမက ဘာကိုပဲ ရွေးရွေး ဘာကက်တဂိုရီမှ မရှိ၊ ဘာ ခရိုက်တီးရီးယားမှ မရှိတာမို့
အမြဲ လွဲပြီး မှားနေတာ။
ပစ္စည်းရွေးပဲ မှားမှား လူရွေးပဲ မှားမှားးး
အဲဒီ အမှားကြီးမှာ စိတ်ညစ်ခံပြီး ကြာကြာမနေနဲ့။ သိလားး
ကိုယ့်ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ။
ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့၊ အသက်ရှည်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့ လူပို ပစ္စည်းပိုကို စွန့်ထုတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မတွန့်နဲ့ သလားးး
(သများ မြှောက်ပေးတာ ဟုတ်ဘူးနော်)
အဲဒီ အမှားကြီးမှာ စိတ်ညစ်ခံပြီး ကြာကြာမနေနဲ့။ သိလားး။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့၊ အသက်ရှည်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့ လူပို ပစ္စည်းပိုကို စွန့်ထုတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မတွန့်နဲ့ သလားးး
ဟုတ်တယ် မချွိရေ…. ငယ်ငယ်ကဆို…ကိုယ်သဘောကျတဲ့ပစ္စည်းတွေ ကျိုးသွားပဲ့သွားရင်တောင် မပစ်ရက်လို့ တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီး ကောက်သိမ်းခဲ့တာ…၊ ပြီးမှ မြင်နေတိုင်း အကောင်းအတိုင်းမရှိတော့လို့ စိတ်ဆင်းရဲရတာရယ်…မချွိပြောသလို အပိုပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့် နေရာရှုပ်ရတာရယ်ပဲ ရှိတာပါ….။
ပျောက်နေရဲ့နဲ့ လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ….
မချွိပြောသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်၊ သက်သာအောင် နေကြည့်နေတယ်….။
အဲလေ ရေးတဲ့သူက သိပ်ချောနေလို့လားးးး
စာ ချောတယ် အရေးအသား ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာ အတည်ပါနော်
အရင်ကသာ အတွေ့စောခဲ့ရင် ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ပေးဖို့ ရီးစားစာ ရေးခိုင်းမိမှာ
အခုက စာပေးတဲ့ခေတ် ကုန်သွားလို့
စာမူထဲက အနှစ်ချုပ် နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးကို
ကျနော်ကတော့ ဖိနပ်တစ်ရံကို ဘယ်လောက် အသစ်အဆန်းပေါ်ပေါ် ရင်မခုန်မိပါပဲ
ကိုယ် တစ်သက်လုံး ဝတ်ချင်လာခဲ့တဲ့ ကတ္တီပါ ညှပ်ဖိနပ်တွေကိုပဲ အမြဲ ရင်ခုန် မြတ်နိုးမိခဲ့သူ
ညှပ်ဖိနပ် ကတ္တီပါလေးတွေဟာ မိုးတွင်ူးက လွဲရင်
ဘယ်နေရာ ဘယ်အခြေအနေဖြစ်ဖြစ် စီးရတာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ စိတ်ကျေနပ်နေစေတယ်လို့ ယူဆမိတာ
ဒါပေမယ့် စာအုပ် တစ်အုပ် လေးငါးထောင် ဝယ်ဖို့နှမြောတွန့်တိုခြင်းမရှိပဲ
.ငွေအဆင်သင့်ရှိချိန်နဲ့ စာအုပ်လိုချင်တာ ကြုံရင် ဘတ်ခနဲ ဝယ်လိုက်တတ်သူက
ဖိနပ်တစ်ရံ ငါးထောင်ကျော်ရင် နှမြောလို့မဆုံးဘူး။
ဒီအချိန်ထိ ဖိနပ် သောင်းကျော်တန် ဝယ်မစီးဖူးသေးဘူး။
အလွန်ဆုံး ငါးထောင်ပဲ စီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာချည်းပဲ
ဒီတော့ ဈေးနည်းတဲ့ဖိနပ်ဟာ အရည်အသွေးညံ့ပြီး ကြာရှည်လည်း မခံတော့ဘူး။
သိသိနဲ့ နှမြောစိတ်ဖြစ်လို့ အရည်အသွေးကောင်းတာကို မဝယ်ဖြစ်တာ။
နောက်ပြီး လမ်းသွားရင်း ဖိနပ်ပြတ်မလားလို့ တွေးပူတတ်သေး
ဖိနပ် ခေါင် လှုပ်နေပြီဆိုရင် အဲ့ဒီဖိနပ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ လမ်းမထွက်ချင်
ခေါင်နည်းနည်း လှုပ်နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံကိုစီးပြီး လမ်းထွက်ရတာ
ရုပ်သိပ်ဆိုးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်သူအဖြစ် လက်တွဲပြီး လမ်းထွက်ရတဲ့အဖြစ်နဲ့များ
ဒါမယ့် ကျနော်ထားခဲ့သမျှ ရီးစား ငါးယောက်လောက်ထဲမှာ
နိစာရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကလဲ အောက်ဆုံးစာပိုဒ်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အဟေးးးဟေးးးး
ပြတ်ခါနီး ဖိနပ်ကို စီးရတာ ရုပ်ဆိုးဆိုးမိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်သူတော်ထားပြီး လမ်းထွက်ရတာနဲ့တူလား? နာတော့ အဲ့လိုမတွေးဘူး။ ပြောင်းပြန်တွေးရင် နီပြောသလို ရုပ်ဆိုးဆိုးမိန်းမကို ချစ်သူတော်ပြီးလမ်းထွက်တာဟာ ခလုတ်တိုက်ထားလို့ ဖိနပ်ထိပ်ဦး ပွန်းနေတဲ့၊ ရွှံ့တွေထဲသွားထားလို့ ခြေမနဲ့ ခြေညှိုးကြားထောင့်မှာ ညစ်ပတ်နေတဲ့ ဖိနပ်နဲ့လမ်းထွက်ရသလိုပဲ၊ ကိုယ့်ဖိနပ်အတွက် လူအမြင်မှာတျဂုဏ်ယူလို့မရတဲ့ မသိစိတ်က ခံစားချက်ဖြစ်မယ်။
ပြတ်ခါနီးဖိနပ်နဲ့ လမ်းထွက်ရတာကတော့ ကိုယ့်ကိုဘေးမှာထားပြီး တခြားဘယ်ယောကျာ်းနောက်ပါသွားမလဲ မသေချာတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်သူတော်ပြီး လမ်းထွက်ရသလိုပဲ။
သူ့စွန့်ခွာမှုက ကိုယ့်ကိုပါ ကမောက်ကမနဲ့ အရှက်ကွဲစေတယ်။
မန်းလေး သားရေစိမ်းဖိနပ်ကို အကြိုက်ဆုံး။ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အရပ်ပုတော့ ဘတ်စကားလက်ကိုင်ကိုမမီမှာစိုးတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဒေါက်နည်းနည်းပါတဲ့ ဖိနပ်ပဲ ရွေးရတယ်။
အဲတော့ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအနေနဲ့ ကတ္တီပါ ပုံတော် ဖိနပ်ကို ရွေးပါတယ်။
pencil heel တော့ ကြောက်ကြောက်။
ဟုတ်တယ် အာတီဒုံ…။ ကောင်းကင်ပြာလဲ တစ်ခါတစ်ခါ ဖိနပ်အမြင့်တွေစီးရတာ စိတ်ပျက်လာတယ်….။ မြင့်နေရင် သွားရမယ့်လမ်းခရီးကို တွက်ရချက်ရနဲ့…..
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ အာတီဒုံလိုပဲ ကတ္တီပါ ဖိနပ်အပါးစီးဖြစ်တယ်….။ အဲ့ဒါက ဈေးဝယ်တာတို့လို ဟိုနားဒီနားသွားတာမျိုးတို့လိုဆို ခြေထောက်မနာဘဲ လမ်းသလားလို့ အကောင်းဆုံးပဲ….။
ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့။ အရေးအဖွဲ့ ကောင်းလေးပါ ကင်းကောင်လေး။
အရီး ကတော့ ဖိနပ် ထက် အိတ် သရဲ ပါ။
ငယ်တုန်းက အစ်ကို က အိတ်မျိုးစုံ ဝယ်ပေးတာ ကနေ အကျင့်ပါသွားတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
အခုလဲ အိတ်အမျိုးမျိုး ကို ရူးဆဲ။
ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီး အိတ် တွေ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဈေးပေါ တာလေးတွေဘဲ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိနပ်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကတ္ထီပါ အပါး ဘဲ စီးပါတယ်။
တံဆိပ် က လှည်းဘီး လားမသိ။
ပွဲသွားရင်တော့ ၃လက်မလောက် ခွါအထူညီတဲ့ အမြင့် ကြိုးသိုင်း ဖိနပ် တွေ ကို ကြိုက်တယ်။
ကြိုးသိုင်း ဘဲ စီးတယ်။
အရီး ဖိနပ် ရာဇဝင် ကတော့ နှစ်မျိုး ထဲ။
ငယ်ငယ်ကဆို အိတ်အကြီးကြီးတွေကို အရမ်း ကြိုက်တာ..။ သူငယ်ချင်းတွေကဆိုပြောတယ်…နင့်အိတ်တွေက နင်သာမက နင့်တစ်မျိုးလုံးတောင် ထိုင်လိုက်လို့ ရတယ်တဲ့….။
သူရို့ပြောတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်….။ တစ်ခါတစ်လေ အိတ်ကွယ်လို့ လူက ပျောက်ပျောက်သွားတယ်…
တစ်ခါ ဓာတ်လှေကားထဲမယ် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရပြီးတော့ ကျောပိုးအိတ်နဲ့ ချိုင်းညှပ်ရတဲ့ အိတ်မျိုးတွေဆို မ၀ယ်ဖြစ်တော့…၊ ကြိုးအရှည်ပါရင်ပါ၊ မပါရင် လက်ကကိုင်ရတဲ့အိတ်မျိုးတွေပဲ ကိုင်ဖြစ်တော့တယ်….
မချွိလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အိတ်လေးတောင် မကိုင်ရက်လို့ ခုထိသိမ်းထားတုန်း….
-အရိုးဆုံးက အမြဲတန်းဆန်းသတဲ့ ကောင်းကင်ပြာရေ..
-ဟိုက်ဟီးလ်တွေ ဘလောက်လှလှ..နေ့တိုင်းတော့ ခြေထောက်အနာခံပြီး မစီးနိုင်ဘူးလေ
-တခါတလေ..စိတ်အဆာပြေဖို့ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းအသစ်တွေ ၀ယ်စီးတာမျိုးကတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်..
-ကို့အ့တွက်သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံးဖိနပ်က ဘလိုဒီဇိုင်းလဲ ဆိုတာ သိနေဖို့ဘဲလိုတာ
ဟုတ်တယ် မရွှေအိ…။ တစ်ခါတစ်လေ သွားနေရင်း ခြေထောက်အရမ်းနာလာလို့ ဖိနပ်အပါးရှာဝယ်စီးရတာမျိုးလဲ ကြုံဖူးတယ်…။
မရွှေအိ ပြောသလိုပဲ…။ ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာအဖြစ်ဆုံးက အကောင်းဆုံးပါပဲ…
ကလေးတွေရှေ့မှာလဲ ဖိနပ်မချွတ်ရဲဘူးမှုတ်လား မမဂျီး…..
စကားစပ်မိလို့……အလှူနေ့က ကလေးတွေ မျက်စိကျတဲ့ဖိနပ်လေးရော…..သွားရှာပြီလားငင်….
ဖိနပ်တွေက စီးလို့ မဝခင် စုတ်ပြတ်သွားတာ များလို့။
ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိကျတဲ့ ဖိနပ်၊ သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ လှတဲ့ ဖိနပ်များဆို ၂ ရံလောက် ကြိုဝယ်ရတယ်။
နောက် လိုချင်ရင် ရှာမတွေ့မှာစိုးလို့။
နာ့ညလေး ဖိနပ် ဆိုဒ်က ဘယ်လောက်တုန်းး
ကောင်းကင်ပြာ ဖိနပ်ဆိုဒ်က ၃၇ ။ အမေနဲ့ ဖိနပ်ဆိုဒ်တူတူမို့ အမေ့ဟာတွေ အလစ်ခိုးစီးတိုင်း ဆူခံထိတာ…။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် ဖိနပ်ကြွေးတောင်းနေသေး…။
အမေကလဲ ကောင်းကင်ပြာ့အိတ်တွေ ယူကိုင်နဲ့….သားအမိနှစ်ယောက် နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ အကြွေးပတ်တောင်းနေရတယ်…
ဘု တွေဆို ၃၉ မှ ရတယ်။
အစ်မမှာလည်း…ဖိနပ်ဇာတ်လမ်းတွေများပါ့…. အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ့်အတွက် အနှောက်အယှက်မရှိသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ဖိနပ်မျိုး…ကိုယ့်ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်တာမျိုးတွေပဲဝယ်ဖြစ်တော့တယ်… ဖိနပ်တွေ..အိတ်တွေ.. လှလို့ဝယ်ခဲ့ပြီး။အခွံတွေလန်.. ခွာတွေပြိုကျတဲ့ဒွတ်ခတွေ ခံရပေါင်းများပြီးမှ ရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေ.. :))
ဟုတ်တယ်..မခွစ်…ဖိနပ်ရော အိတ်ရောက အသုံးမပြုတာကြာရင် ပျက်စီးကုန်ရော…မခွစ်ပြောသလို ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ….
အစ်မကတော့ ဖိနပ်ကို ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာပဲစီးဖြစ်တယ်။အရပ်မြင့်တော့ ဖိနပ်မြင့်တွေလည်းမစီးဖြစ်ဘူး။
၀ယ်ရင် နည်းနည်းလေးမှ မြင့်တာ မ၀ယ်ဖြစ်ဘူး။
ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်း အတိုအထွာလေးတွေနဲ့ ပစ္စည်းအဆန်းအပြားလေးတွေပဲ ခရေဇီဖြစ်တယ်။